इस्मामा एमालेले गरायो मनोनयन दर्ता, कुन वडामा को ? - Gulminews
इस्मामा एमालेले गरायो मनोनयन दर्ता, कुन वडामा को ?
२०७९ बैशाख ११, १८:४५
गुल्मी, ११ बैशाख । इस्मा गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले उल्लासपूर्ण रुपमा मनोनयन दर्ता गराएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित ६ वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा मनोनयन गर्दा गरिएको हो । ६ वटै वडाबाट कार्यकर्तासहित उपस्थित भएका उमेदवारले इस्मा रजस्थल स्थित राधाकृष्ण टोलमा भेलाको आयोजना गरेर मनोनयन गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए ।
गाउँपालिका प्रमुखमा हिरा एसी र उपप्रमुखमा बिमला खत्रीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै वडा नं १ मा वडाध्यक्षमा नाम बहादुर कुवंर, वडा नं २ मा राजेन्द्र बिक्रम कुवंर, वडा नं ३ मा ज्योतिराज कुवंर, वडा नं ४ मा मान बहादुर बस्नेत, वडा नं ५ मा नारायण पैयानी र वडा नं ६ मा पुन हिरा जिसीले वडाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गराएको नेकपा एमाले इस्मा गाउँकमिटी सचिव गनुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट इस्मा गाउँपालिका प्रमुहखका उमेद्वार हिरा एसीले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि आफुहरुलाई जिताउन सवै कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । त्यस्तै उपप्रमुखको उमेदवार बिमला खत्रीले पाँच बर्षे अनुभवबाट अझै धेरै रचनात्मक काम गर्न जनताको साथ चाहिएको बताइन् ।